कहरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउदैछौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कहरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउदैछौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता November 21, 2018	0 194 Views
आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख कर अधिकृत
करको महत्वबारे नागरिकलाई सचे तना दिने उद्देश्यले हरे क वर्षको मंसिर १ गते दे खि साताव्यापीरुपमा राष्ट्रिय कर सप्ताह मनाइन्छ । यसपालि ‘कर समृद्ध ने पाल सुखी ने पालीको भर’ भन्ने नारा तय गरी विभिन्न चे तनामूलक कार्यक्रम भइरहे को छ । राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार भने कै कर हो  । तर यसको संकलन र सदुपयो गका विषयमा संवे दनशीलता कम दे खिएको भन्ने गुनासो वषेर् नि आइरहन्छ । एकातिर करदाता बढाउन करको महत्व बुझाउदै हिड्ने , राम्रा करदाताहरुलाई पुरस्कृत, सम्मानित गदैर् जाने काम भइरहे को छ भने अकोर् तिर नागरिकबाट संकलित करको रकम विलासितामा सिध्याइदै छ भन्ने गुनासो आइरहे का बे ला कर सप्ताह र यसको महत्वका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख कर अधिकृत लीलाप्रसाद शर्मासग गरेको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
राज्यलाई कर किन तिनेर् नागरिकले ?
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो  । किनभने ०७२ को संविधानले नागरिकका मौ लिक हकअन्तर्गत नागरिकका कर्तव्यहरु उल्ले ख गरिएका छन् । पहिले अधिकारको कुरा मात्रै हुन्थ्यो । अहिले को संविधानले अधिकारस“गै नागरिकका कर्तव्यका कुरा पनि उल्ले ख गरे को छ । ती कर्तव्यहरुमा नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भने र शव्द नले खे पनि ती कर्तव्यको निचो ड के छ त भन्दा नागरिकको दायित्व कर तिनेर् पनि हो  । अकोर् कुरा चाहि“ राज्य सञ्चालनका लागि करबाटै उठे को रकमले हो  । जसरी अक्सिजनबिना जीवन छै न । त्यसै गरी राज्य सञ्चालनका लागि कर अक्सिजन बराबर नै हो  । दे श चलाउन अर्थस्रो त चाहिन्छ । त्यो अर्थस्रो तको पहिलो आधार भने को कर नै हो  । जुन राज्यले विभिन्न नाममा नागरिकस“ग लिने गर्दछ ।
राज्य सञ्चालनको हिस् से दार बन्न नागरिक स् वस् फूर्त कर तिर्न जाने वातावरण किन बने न ?
त्यस्तो हो इन । नागरिकले स् वस् फूर्तरुपमा कर बुझाउन आइरहनुभएको छ । हामीले महसुस नगरे को हो  । गत वर्ष सरकारले सात खर्ब बढी राजस् व संकलन गरे को छ । पहिले –पहिले दे शकै बजे ट डे ढ, दुई खर्बका हुन्थे  । अहिले सात खर्ब बढी राजस् व उठ्ने भने को नागरिकको उत्सुकताले नै हो  । अहिले को सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनपछि आर्थिक भार पनेर् दे खिएपछि नौ खर्बवढी राजश्व संकलन गनेर् महत्वाकांक्षी लक्ष बनाएको छ । चालु आवको साउनदे खि कार्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दाको प्रगतिलाई हे नेर् हो भने चौ मासिकरुपमा उठे को राजस् वले सरकारले लिएको नौ खर्वको लक्ष हासिल गनेर् दे खिएको छ । त्यसै ले करदाताहरुले स् वतस् फूर्त रुपमा कर नतिरे को भए, कर प्रशासनले क्रियाशील भएर काम नगरे को भए यति धे रै राजस् व उठ्ने थिएन हो ला । यसै बाट पुष्टि हुन्छ कि सबै नागरिकले कर्तव्यबो ध गरे र रहरका साथ, सक्रियतापूर्वक कर तिरिरहे को अवस्था हो  ।
हिजो भन्दा के ही बढे पनि जतिले कर तिर्नुपनेर् हो त्यतिले अहिले पनि तिदैर्न हो इन र ?
हो यो कुरा चाहि सत्य हो  । जति हुनुपनेर् हो त्यतिको कर सहभागिता छै न । पौ ने तीन करो ड जनसंख्यामा १८ लाख बढी करदाताहरु हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम्तिमा चाहि“ कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत करदाता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हामीले पनि आगामी पा“च वर्षभित्र करदाताको संख्या ३० लाख पु¥याउने महत्वाकांक्षी यो जना सरकारले अघि सारे को अवस् था पनि छ । हाम्रो कुरा गनेर् हो भने तुलसीपुरमा कार्यालय भएर सीमित स्रो त साधन र जनशक्तिले दुर्गमका छ वटा जिल्लामा काम गर्नुपनेर् बाध्यता छ । तर पनि हामीले कर सप्ताह, करदाता प्रशिक्षणलगायत थुप्रै गतिविधि वर्षभरि गरिनै राखे का छौ ं । यी सबै गतिविधि के हुन त भने धे रै भन्दा धे रै लाई करको दायरामा ल्याउनका लागि गरिएका हुन् । तपाइ“ले भने जस् तो धे रै क्षे त्रलाई करको दायराभित्र ल्याउन बा“की नै छ । करको दायरामा आएकाले पनि आफ्नो कारो वारको पूर्ण विवरण दिएर कर तिरे को अवस् था छै न । त्यसै ले हाम्रो प्रयास भने कै करको दायरामा नआएकालाई दायरामा ल्याउने र आएकालाई कारवाहीको डर दे खाएर, सम्झाइ बुझाइ गरे र, उहा“हरुलाई शिक्षा, सूचनाको माध्यमबाट आफ्नो कारो वारको सही विवरण पे श गरे र बढी भन्दा बढी कर दाखिला गर्न उत्प्रे रित गनेर् हाम्रो प्रयास जारी छ । यसै को लागि कर प्रशासन क्रियाशील छ र त्यसै को उदाहरण हो गत वर्ष सात खर्ब उठे को छ भने अहिले आएर नौ खर्ब उठाउनतिर लागिरहे का छौ ं । बढिराखे को छ ।
सामान्य नागरिकले थरिथरिका करको विषयमा नबुझ्दा पनि समस्या भयो कि ?
थरिथरिका भन्दा करको प्रिन्सिपल के हुन्छ भने एटम बम बनाउने प्रिन्सिपल बरु छिटो बुझिन्छ रे तर करको प्रिन्सिपल छिटो बुझिदै न भन्ने विश्वव्यापी एउटा भनाइ छ । करको प्रिन्सिपल एकदमै गाह्रो विषय हो  । तर करदाता तथा आमनागरिकलाई हामी के अनुरो ध गछौर् ं भने उहा“हरु जस् तो प्रकारको व्यवसाय, गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो व्यवसायले के कस् ता करहरु तिर्नुपर्छ उहा“हरुले त्यति कुरा जान्दा पुग्छ । जस् तो अब आयकर मात्र लाग्ने व्यवसायमा संलग्न भएका मान्छे ले भ्याटको रो ल बुझ्न जरुरी छै न । मदिराजन्य वस् तुको कारो वार गनेर् ले भ्याट पनि तिर्नुपर्छ । आयकर पनि तिर्नुपर्छ, अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्छ । त्यसकारण उहा“हरुले यी तिनवटै विषय जान्नुपनेर् हुन्छ । त्यसकारण विभिन्न थरिका व्यवसाय छन् । विभिन्न शीर्षकका कर छन् । सबै ले सबै किसिमका करका बारे मा अपडे ट हुन जरुरी छै न तर बुझिराख्दा नराम्रो ह“ुदै न फाइदा नै हुन्छ । धे रै प्रकारका कर भएका कारणले कर सहभागिता कम भएको भन्ने कुरा चाहिं हो इन ।
एउटा नागरिकले जताततै तिर्नुपनेर् कर एकीकृत रुपमै बुझाउन सकिदै न र ?
यता पनि तिनेर् उता पनि तिनेर् भन्ने ह“ुदै न । संघीय सरकारअन्तर्गत लिइने कर हामीबाटै हो  । आन्तरिक राजस् व कार्यालय र यस कार्यालयले तो के का १२ वटा बै ंक जहा“बाट तिरे पनि हुन्छ । तर अहिले को संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस् था गरे को छ र संविधानको अनुसूचीमा ती सरकारहरुले यो –यो किसिमको कर यो –यो तहको सरकारले लगाउने भन्ने कुरा उल्ले ख गरे को छ । त्यो तीन तहका सरकारहरुले फरक–फरक करहरु लगाइरहे को अवस् था छ । जस् तो घरबहाल कर नगरपालिकामा तिर्नुप¥यो  । अकोर् कुनै प्रकारको कर प्रदे श सरकारले पनि लगाएको हो ला भने के न्द्र सरकारअन्तर्गत हामीले लगाउने कर भने को आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्कको काम हामीले गरिरहे का छौ ं । अहिले हामीले ऐ तिहासिक संघीयताको अभ्यास गरे को हुनाले प्रदे श र स्थानीय सरकारले पनि राम्रै गर्नका लागि विभिन्न खालका कर लगाउनुभएको छ । के ही विवादित र व्यावहारिक भएन भन्ने कुरा पनि आयो  । जस्तो गाई, भै ंसीमा पनि कर लाग्यो  । धे रै ठाउ“मा सच्याउने काम पनि भएका छन् । राम्रै कामका लागि गरिएको मा अव्यावहारिक हुदा सुधारे र अघि बढ्ने काम पनि भएको छ । समग्रमा के हो भने कुनै करदाताले सबै खालका कर तिर्नुपदैर् न । आफूले गरे का व्यवसायको प्रकृति हे रे र आय, मु.अ. र अन्तःशुल्क तिनेर् हो  । घरबहाल कर पहिले के न्द्र सरकारले लिन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । नया“ संरचनाको अभ्यास गर्दा के ही समय अन्यौ ल भएको मात्रै हो । पछि त्यो आफै सहज भएर जान्छ ।
कर छली गनेर्लाई के हुन्छ ?
कर छले बापत दण्ड सजाय हुन्छ । २९ दिन तपाइहरुले राज्यलाई छल्नुहुन्छ तर एकदिन राज्यले तपाइ“हरुलाई समात्यो भने कति प्रकारको दण्ड सजाय हुन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्छ । कारवाहीको भागिदार भइन्छ । जे ल सजायसम्मको व्यवस् था गरिएको छ । राज्यलाई कर छल्ने काम गर्दा तपाइहरुलाई यस्तो समस् या पर्छ भन्ने कुराको सन्दे श दिनकै लागि हामीले कर सप्ताह आयो जना गरे का छौ ं । त्यस् तै वर्षभरि नै कर शिक्षाका कार्यक्रमहरु पनि गरिरहे का हुन्छौ ं । बजार अनुगमन पनि गरिरहे का हुन्छौ ं ।
त्यही कर छली नहो स् र कर छल्ने लाई हुने दण्डका विषयमा जानकारी गराउन नै यस् ता गतिविधिहरु हामीले गरिरहे का छौ ं । कर प्रशासनका कर्मचारीहरुले , मिडियाले , प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ने तृत्वमा रहे को जिल्ला राजस् व सहनिन्त्रण समिति भन्ने हुन्छ ।
खासगरी यो समिति तराईका जिल्लामा बढी क्रियाशील हुन्छ । बढी चो री निकासी हुने नाकाहरुमा हामी सबै मिले र करदाताहरुलाई सचे तना दिने हो  । सचे तना दिइसके पछि क्रमिकरुपमा सुधार आउछ । चो री निकासी गनेर् हरुलाई त हामीले सूचना परिचालन गनेर् , चो री निकासी भएर आएको छ भने कर प्रशासनलाई भनिदिएर सहयो ग गनेर् , हामी त्यहीं गएर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । हामीले सामूहिक प्रयासद्वारा कर छलीको समस् यालाई न्यूनीकरण गदैर् जाने हो  ।
छुट्कारा दिने काम पनि भएको छ नि ?
कर छली गरे को कुराको कर प्रशासनले सूचना पाएको हदसम्म, कर प्रशासनको स्रो त साधनले भ्याएको हदसम्म छुट्कारा पाउने भन्ने कुराको प्रश्नै उठ्दै न । अब मै ले अघि पनि भनिसके ं कि छ जिल्लामा ५५ हजार जति करदाता हुनुहुन्छ । भौ गो लिक विकटता पनि त्यस् तै छ । हामीस“ग जनशक्तिको अभाव पनि त्यस् तै छ । मानौ रो ल्पालगायत कुनै दुर्गम ठाउमा कर छली भयो भन्ने यहा“ खबर आयो भने हामी त्यहा“ पुग्नु भन्दा हामीले त्यहा“को स् थानीय प्रशासनको मद्दत लियौ ं भने छिटो हुन्छ । यस् ता विभिन्न प्रतिकूलताले ठाउ“को ठाउ“ कारवाही गर्न नसके पनि हामीलाई सूचना आइसके पछि छुट्कारा पाउने भन्ने ह“ुदै न ।
चुहावट गनेर्लाई करको दायरामा ल्याउन नचाहे र पनि हो कि ?
त्यस् तो कुरा हु“दै न । के ही प्रतिशत नराम्रा मान्छे हरु वा गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु समाजका हरे क क्षे त्र, पे शा, व्यवसाय जहा पनि हुन्छन । संवे दनशील ठाउ“हरुमा काम गनेर् हरुले त गल्ती ग¥यो भने र बे ला–बे लामा आइरहे का हुन्छन् । यस् तो कुनै क्षे त्र छै न जहा पे शागत मर्यादा बिर्सिने र सीमित स् वार्थ हे नेर्  प्रवृत्ति त्यो जुनसुकै पे शा, व्यवसाय र क्षे त्रमा पाइन्छ । तर छुट दिइयो , दायरामा ल्याइएन भन्ने कुरा समग्रतामा हे र्नुहु“दै न । हाम्रो पो दुर्गम छ र भन्न मिल्ला तर काठमाडौ ंमै पनि हे र्नुस् १३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत १४ वटा कार्यालय छन् । त्यति हु“दाखे री पनि जनशक्ति हु“दाह“ुदै पनि कामको चापले सो चे जस् तो बजार अनुगमन हुनसके को छै न । समग्र दे शभरिकै अवस् था यस् तै छ । तर पनि हामीले चुहावट हुने , छल्ने ठाउ“ र व्यक्तिलाई कारवाही गछौर् ं । सबै लाई एक–एक गरे र निगरानी गर्न हाम्रो क्षमताले भ्याउ“दै न तर पनि जहा“ बदमासी हुन्छ त्यहा“को सूचना पाउनासाथ कारवाही गर्न हामी तयार छौ ं । गरे का पनि छौ ं । अहिले त सबै अभिले ख कम्प्युटर सिस् टममा छ । हामीले आफ्नै टे बुलमा बसे र पनि कहा बदमासी भएको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सक्छौं । एकाध को ही कसै व्यक्तिले गरे का गल्तीलाई समग्रतामा हे रिनुहुदै न भन्ने मे रो भनाइ हो  । त्यसो कतै छ भने सूचना दिएर सहयो ग गर्न पनि मे रो आग्रह छ । चुहावट रो क्ने कुरा सुधारो न्मुख नै छ ।
के गर्न सकिन्छ त चुहावट रो क्न ?
जादूको छडी घुमाएजस् तो चुहावट रो क्न यस्तै गर्न सकिन्छ भन्ने छै न । तर पनि चुहावट हु“दै गरे को सूचना दिएर, चुहावट गर्नुहु“दै न भन्ने जनचे तना जगाएर रो क्ने प्रयास गनेर् हो  । त्यसमा हामी कर प्रशासन त अहो रात्र लागिरहे कै छांै । त्यसमा मिडियाले पनि साथ सहयो ग दिनुपर्छ । त्यस् तै स् थानीय प्रशासनले पनि सहयो ग गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै हो इन एउटा सचे त नागरिक जसले पनि हामीलाई चुहावटको विषयमा जानकारी दिएर रो क्ने कुरालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । करदाता स् वयंले पनि बाकी नतिनेर् हरुको सूचना दिएर चुहावट रो क्न सकिन्छ । यी सबै कुरा असम्भव छै न तर यी सबै क्षे त्रले सहयो ग गनेर् समय आउदै छ ।
ठूलालाई छो ड्ने, सानालाई कस् ने व्यवहार छ भन्ने सुनिन्छ के हो ?
त्यो गुनासो अहिले सम्म मै ले सुने कै छै न । कर प्रशासनको प्रिन्सिपलले के भन्छ भने कर लगाउदा दुई तीनवटा कुरा हे र्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस् तरकै मान्यता हो कि उसको तिर्नसक्ने क्षमता कस् तो छ ? भन्ने हो  । त्यसै ले तपाइले सुने जस्तो हो इन । बरु सानालाई हामीले कम प्राथमिकतामा राख्छौ ं । ठूला कर छलीहरुमा हामी बढी ध्यान दिन्छौ ं । जस् तो बजारमा महिनामा यति धे रै पान बिक्री गर्छांैर् पानको कर तिर हामी भन्दै नौ ं । किनभने त्यसमा लाग्ने जनशक्तिले त करो डौ ं छली गनेर् हरुको सूचना निकाल्न सक्छौ ं । त्यसै ले हाम्रो टागेर् ट भने कै बढी कर उठ्ने , कारो वार हुने क्षे त्र, ठाउ वा चुहावट पनि धे रै हुने ठाउ“मा हाम्रो ध्यान हुन्छ ।
स् वयंकर घो षणा प्रणाली छ नि यसले चुहावटलाई बढावा दिदै न र ?
सामान्य हिसाबले हे र्दा त्यस् तै हो कि भन्ने लाग्छ । हाम्रो कर कानूनले एउटा करदाता पहिलो कर अधिकृत माने को छ । उसले दिनभरि भएको कारो वारको विवरण हामीलाई दिएर कर बुझाउने हो  । तर उसले बुझाएको विवरण वस् तुसंगत लागे न भने मात्रै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हो  । २०५८ अघिको कर प्रणाली झन भरपदोर् थिएन । अहिले को कानुनअनुसार यदि करदाताले सही विवरण दिएर काम गनेर् हो भने त कार्यालयको बो झ थपिने थिएन नि ? हो त्यही भएर पहिलो कर अधिकृत भनिएको हो करदातालाई ।
सप्ताहको सन्दे श केही छ ?
नागरिकले स् वःस् फूर्तरुपमा कर तिर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि कर कार्यालय धाउनै पर्छ भन्ने छै न । यसपालिदे खि हामीले इपे मे न्ट सिष्टम शुरु गरे का छौ ं । आफ्नो मो बाइलबाटै कर तिर्न सकिने छ । कुनै पनि बै ंक डिपो जिट गरे र भौ चर ल्याएर बुझाए पनि हुन्छ । हामीले से वाका लागि के ही सुधारका काम गरिरहे का छौ ं ।
यति ह“ुदाह“ुदै पनि रो ल्पा, प्युठानबाट कर तिर्न दाङ आउनुपनेर् बाध्यता हटाउन त्यतै कतै कर कार्यालय स्थापना गर्नुप¥यो
भने र माग आएको छ । हो , केही सजिलो के ही अप्ठे रा अहिले पनि छन् । यति हुदाह“ुदै पनि करदाताहरुलाई दायरामा
ल्याउने , आएकालाई प्रो त्साहित गनेर् कार्यक्रम पनि गरिरहे का छौ ं । उत्कृष्ट कर दाखिला गनेर् करदातालाई सम्मान गनेर् , पुरस् कृत गनेर् काम गरिरहे का छौ ं । यसले पनि स्वस्फूर्तरुपमा कर तिर्न आउने वातावरण बन्ने छ । कहरले हो इन रहरले कर तिनेर् वातावरण हामी बनाउ“दै छौ ं ।
Previous: पार्टी नेतृत्व नीतिमा चल्न सकेनः सिंह
Next: महासंघको स्थापना दिवसमा तीन अक्षय कोष स्थापना